जनयुद्धकी पहिलो महिला कमाण्डर अोनसरी, यसरी भइन् पहिलो महिला सभामुख | Suvadin !
अोनसरी पहिलो महिला माअोवादी लडाकू कमाण्डर मात्रै भइनन्, जनयुद्धको अन्तिम सैन्य मोर्चामा पनि उनी सहभागी भइन्। जनयुद्ध र जनअान्दोलनसँगै अोनसरीको यात्रा संसदतर्फ अघि बढ्यो। वि.सं. २०७० सालमा रोल्पाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएकी अोनसरीले व्यवस्थापिका संसदमा पहिलो महिला सभामुख भएर इतिहास निर्माण गरिन्।
Apr 15, 2018 22:36
जीवन पौडेल, काठमाडौं, २ वैशाख – वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गते नेकपा माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो। पहिलो कारबाही र जनयुद्ध शुरू भएको उद्घोष रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमाथि हमला गरेर भयो।
करिब ४० जना माअोवादी नेता–कार्यकर्ताहरूले होलेरीमा अाक्रमण गरे। जहाँ दुर्इ जना महिला थिए। अोनसरी घर्तीमगर र तारा घर्तीमगर नै पहिलो अाक्रमणका महिला कमाण्डर थिए। अोनसरी पहिलो महिला माअोवादी लडाकू कमाण्डर मात्रै भइनन्, जनयुद्धको अन्तिम सैन्य मोर्चामा पनि उनी सहभागी भइन्।
जनयुद्ध र जनअान्दोलनसँगै अोनसरीको यात्रा संसदतर्फ अघि बढ्यो। वि.सं. २०७० सालमा रोल्पाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएकी अोनसरीले व्यवस्थापिका संसदमा पहिलो महिला सभामुख भएर इतिहास निर्माण गरिन्।
उनी अहिले समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य छिन्। पहिलो महिला लडाकूदेखि पहिलो सभामुखसम्म पुग्दा उनले गरेको संघर्षका कथा नेपालका हरेक युवाका लागि प्रेरणादायी छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीमगरको नाम महिला आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक छ। किनभने ओनसरी नेपालको पहिलो महिला सभामुख भएर इतिहास निर्माण गरिन्।
दुई घण्टा हिँडेर स्कूल
आर्थिक विपन्नताले ग्रस्त राप्ती पहाडका नागरिकमा राजनीति र शिक्षाप्रतिको चेतना थियो। तर, परिस्थिति अनुकूल नहुँदा अध्ययनमा सधैँ बाधा झेल्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो स्थिति अहिले पनि अन्त्य भइसकेको छैन।
ओनसरी घर्तीमगरले पनि त्यस्तै समस्यासँग जुध्नुपर्यो। रोल्पा जङ्कोटका प्रसाद र नौमती घर्तीमगरका ३ जना छोरा र ४ छोरीमध्ये ओनसरी महिली हुन्। ओनसरीको जन्म वि.सं. २०३४ साल कात्तिक महिनाको २८ गतेका दिन रोल्पाको जङ्कोटमा भएको हो।
ओनसरीले कक्षा ५ सम्म बाल उदय प्राविमा पढिन्। कक्षा ६ र ७ नेपाल राष्ट्रिय निमावि कोटगाउँमा पढेपछि कक्षा १० सम्म अध्ययन बालकल्याण मावि लिवाङमा पढिन्। ‘कक्षा ५ सम्म पढ्न गाह्रो भएन, तर त्यसपछि २–३ घण्टा हिँडेर स्कूल जानु पर्यो,’ उनले भनिन्।
नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला सभामुखका रुपमा ओनसरी निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्। संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर–२ निर्वाचित भएकी ओनसरीले संविधानसभामा उपाध्यक्षको भूमिका निभाएकी थिइन्।
हलो जोतेर विद्रोहको प्रारम्भ
सामाजिक विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सानैदेखि नडराउने ओनसरी घर्ती विद्रोहको प्रारम्भ चाहिँ हलो जोतेर भएको हो।
‘जनयुद्ध भनौं वा वामआन्दोलन, यसरी राजनीति गर्न मेरो समाजले नै मलाई बाध्य परेको हो,’ ओनसरीले शुभदिनसँग भनिन्, ‘मेरो लक्ष्य त अर्कै थियो, तर समाजमा रहेको विभेद अन्त्य गर्न मैले जनयुद्धको बाटो रोज्नुपर्यो, किताब छोडेर बन्दुक बोक्नुपर्यो।’
ओनसरीका अनुसार वि.सं. २०४८ सालतिर रोल्पामा कांग्रेसीहरुको जगजगी थियो। झुठा मुद्दामा जेल हाल्न थालेपछि अर्धभूमिगत अवस्थामा बसेको उनले स्मरण गरिन्।
सामाजिक धरातल नै राजनीतिमा प्रवेशको कारण बनेको बताउँदै ओनसरीले २०४९ सालबाट रोल्पाका वामपन्थी कार्यकर्ताहरु अर्धभूमिगत अवस्थामा रहनु परेको जनाइन्। ‘राज्यपक्षबाट हुने आतंकले परीक्षा दिन पनि समस्या हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, सरहरुलाई भनेर, समय अनुकूल भएका बेला परीक्षा लेख्नुपर्ने बाध्यता थियो।’
एकातिर सरकारी दमन अर्कोतिर अभाव र आर्थिक विपन्नताको भूमरी आम नागरिकलाई जनयुद्धतर्फ धकेल्न योभन्दा धेरै के नै चाहियो र! सानैदेखि क्रान्तिकारी स्वभावकी ओनसरी पनि संस्थापक भएर जनयुद्धमा होमिइन्। उनले २०४८ सालमा सेल कमिटीमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेकी हुन्।
तर, जब सरकारले आफ्ना माइला दाजुलाई जेल हाल्यो, यी क्रान्तिकारी बालिका हलो र गोरु लिएर निस्किन्। र, मुलबाटोको छेवैमा रहेको खेतमा जोत्न थालिन्। हलो जोत्दा ‘महिलाले हलो जोत्छन्? हलो जोत्ने आइमाइ राक्षस हो’ जस्ता शब्द सुन्नुपर्यो। उनी यी शब्द सुनेर बसिरहिनन्। उनले प्रतिवाद र प्रतिकार गरिन्।
हाइस्कूल पढ्दै राजनीतिक चेतना
वर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा त्यतिबेला पेसाले शिक्षक थिए। अनि वर्षमान पुन अनन्त चाहिँ सिनियर विद्यार्थी थिए। महरा र पुनको प्रेरणा र शिक्षाबाटै ओनसरी घर्तीलाई राजनीतिमा सशक्त ढंगले अघि बढ्न सहज भयो।
विद्यार्थीलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउनका लागि जलजला युवा क्लब गठन गरिएको थियो। क्लबका सदस्यहरुको काम नाच्ने, गाउने खेलकुद तथा पुस्तक पढ्ने थियो।
‘सरहरुले (कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन) गाइड गर्नुहुन्थ्यो, विभेद र उत्पीडनविरुद्ध आवाज उठाउन सिकाएको पनि उहाँहरुले नै हो,’ ओनसरीले शुभदिनसँग भनिन्, ‘राजनीति नै समाजसेवाको सबैभन्दा उत्तम बाटो हो भन्ने निष्कर्षसहित जीवन राजनीतिमा समर्पण गरेकी हुँ।’
अनन्त र ओनसरीको विवाह
नेकपा माओवादी जनयुद्धको तयारीमा जुटिरहेको थियो। राजनीतिक प्रशिक्षणबाट कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने अभियान पनि निरन्तर चलिरहेको थियो। माओवादीको प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन अनन्त पनि प्रशिक्षणमा जुटिरहेका हुन्थे।
एउटै गाउँका अनन्त र ओनसरीको भेटघाट पनि यसैक्रममा निरन्तर भइरहन्थ्यो। ‘यसरी नै हाम्रो मन मिल्यो, विचार र भावना मिल्यो, अनि जनयुद्ध शुरु हुनुभन्दा केही महिना अगाडि हामीले प्रेमविवाह गर्यौं,’ ओनसरीले भनिन्।
ओनसरी र अनन्तकी एक छोरी शिला र एक छोरा उत्सव पुन छन्।
‘एउटा काम चाहिँ मैले चाहेर पनि पूरा गर्न सकिन,’ उनले गम्भीर मुद्रामा भनिन्, ‘संसद भवन आफ्नै हुनुपर्छ, अहिलेको संसद भवन संसदको प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको होइन।’
सभामुख भएर के गरिन् ओनसरीले?
संविधान सभामा उपाध्यक्ष रहेकी ओनसरी घर्ती व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको जिम्मेवारी निभाउनमा आइपुगिन्। नेपालको पहिलो महिला सभामुख भएको इतिहास निर्माण गर्दैगर्दा केही चुनौति पनि उनीमाथि थिए।
ती चुनौतिमा पार गरेर सफल सभामुखका रुपमा उनी बिदा भइन्। ओनसरीले सभामुख हुँदा गरेका गरेको कार्य यस प्रकार रहेका छन्ः
१, अधिकांश दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर ८४ वटा अत्यन्तै जरुरी कानून निर्माण।
२, मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून निर्माण।
३, संसद बैठक निर्धारित समयमै शुरु गर्ने र निर्धारित समयमै अन्त्य गर्ने।
४, संसद बैठकमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी गराउने उद्देश्यले युट्युबमा लाइभ गर्ने व्यवस्था।
५, सुशासनको प्रयास स्वरुप करोडौंको खर्च कटौती।
६, संसदको बेरुजुलाई शुन्यमा झार्न पनि ओनसरी सफल भइन्।
७, संसद भवन आफ्नै बनाउन पहल।
यी केही उल्लेख्य कार्य मात्रै हुन्। ओनसरीले सभामुखको कार्यकालभरिमा कयौं उल्लेखनीय कार्य गरेकी छिन्।
कमाण्डर उषा अर्थात् ओनसरी घर्ती
नेकपा माओवादीले वि.सं. २०५२ मा रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी हमला गर्यो। ऐतिहासिक जनयुद्धको उद्घोष पनि त्यहीबाट गरियो। महिला र पुरुष गरी ४० जनाले होलेरी प्रहरी चौकीमाथि धावा बोलेका थिए।
जसमा दुई जना महिला थिए। ओनसरी घर्तीमगर (क. उषा) र तारा घर्तीमगर नै त्यो मोर्चाका दुई महिला योद्धा थिए। ‘जनयुद्ध शुरु गर्दा हामी ७ जना महिला जनमुक्ति सेनाको प्रारम्भिक संरचनामा थियौं,’ उनले भनिन्।
रोल्पाबाट २ जना, रुकुमबाट २ जना, सिन्धुलीबाट २ जना महिलासहित ७ जना महिला जनसेनाको प्रारम्भिक संरचनामा रहेका थिए।
रोल्पाबाट शुरु भएको जनयुद्धको लहर मुलुकभरि फैलियो। कयौं मोर्चामा माओवादी सफल भयो। केही विफल पनि भयो। माओवादीले आफ्नो अन्तिम मोर्चाका रुपमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा आक्रमणलाई लिने गर्छ। जसमा ओनसरी घर्ती पनि सहभागी थिइन्।
‘जनयुद्धकै अन्तिम सैन्य कारबाही सिन्धुपाल्चोकको चौतारा थियो, म पहिलो होलेरीदेखि अन्तिम चौतारासम्म सहभागी भए,’ उनले भनिन्।
पहिलो पटकको मोर्चा र अन्तिम मोर्चामा आकाश–जमीनको फरक रहेको बताउँछिन् ओनसरी। उनी भन्छिन्, ‘पहिलो मोर्चा प्रारम्भिक थियो, अन्तिम मोर्चामा जनमुक्ति सेना आधुनिक भइसकेको थियो, एउटै डिभिजनले आक्रमण गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो।’
पहिलो पटक बन्दुक पड्काउँदा...
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता रामबहादुर थापा प्रशिक्षणका लागि रोल्पा गएका थिए। जुन जनयुद्ध शुरु गर्नुअघिको तयारी स्वरुप थियो। ओनसरीका अनुसार नेताद्वयको बिदाईमा ७ वटा बन्दुकबाट फाइरिङ गर्ने तयारी भयो।
ओनसरीले आफूहरु पनि अध्यक्षको बिदाई बन्दुक पड्काउने प्रस्ताव गरिन्। तर, उनको प्रस्ताव पुरुष प्रधान समाजमा हुर्किएका माओवादी नेताहरुलाई नै अस्वाभाविक लाग्यो। ‘साथीहरु हाँस्नु भयो, तर म आफ्नो अडानमा दृढ थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि फायरिङ गर्यौं।’
अब राजनीतिसँगै समाज सेवा
ओनसरी घर्ती अब राजनीतिसँगै सामाजिक कार्यमा लाग्ने लक्ष्य बनाएर अघि बढिरहेकी छिन्। उनले समृद्ध रोल्पा फाउण्डेशन बनाएर सामाजिक कार्यको थालनी गरेकी छिन्। फाउण्डेशनको अध्यक्ष ओनसरी नै हुन्।
‘फाउण्डेशनबाटै हामीले रोल्पाका मंगल बुढाको घर निर्माण गरेका छौं, केही दिनमा घर हस्तान्तरण गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पाको समृद्धि यात्रा यहीबाट प्रारम्भ गर्छौं।’